सपनामा बिहे गरेको देख्छु ~ The Nepal Romania
12:19 PM अन्तर्वाता No comments
-सुमिना घिमिरे, नायिका चलचित्र दुलहीबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा भित्रिएकी नायिका सुमिना घिमिरे अहिले व्यस्त छिन् । उनका आधा दर्जन सिनेमा प्रर्दशनको लाइनमा छन भने आधा दर्जन वढि सिनेमामा अभिनय गरिरहेकी छिन् । यिनै ब्यस्त नायिका सुमिनासँग अनलाइनखबरका लागि विजय आवाजले गरेको सपना-सम्बाद । सपना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? देख्छु तर सधै हैन् । सपनामा विश्वास लाग्छ ? देखेको कुरा मिल्यो भने मात्र लाग्छ नत्र भने लाग्दैन । सपना के हो जस्तो लाग्छ ? सपना एउटा सुझाव हो, जसले मानिसलाई धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ । सपना ब्लायक एण्ड ह्वाइट देख्नुहुन्छ कि रंगीन ? म त रंगीन नै देख्छु । विहानपख देखेको सपना पुरा हुन्छ भन्छन् नि, त्यस्तो लाग्छ ? त्यस्तो त लाग्दैन । हामीले आस्था
राखेको मात्र हो । नराम्रो सपना देखेपछि उठ्दा कत्तिको डर लाग्छ ? एकदमै। नराम्रो सपना देखें भने मन्दिर जान्छु र पुजा गर्छु । प्रायः तपाई सपनामा के देख्नुहुन्छ ? म धेरैजसो मन्दिरमा गएको देख्छु । आकाशमा उडिरहेको देख्छु । पुल तरेको देख्छु । सपनामा कत्तिको भुत देख्नुभएको छ ? भुत त देखेको छैन । सर्प र मानिसले लखेटेको मात्र देख्छु । डरलाग्दो सपना देखेर चिच्याउनु भएको छ ? त्यस्तो खासै छैन् । सपना राम्रो देखेपछि नी ? एकदम आनन्द लाग्छ । सपना देखेपछि कसैलाई सुनाउनुहुन्छ ? राम्रो कुरा छ भने सुनाउनुहुँदैन भन्छन् यसैले सुनाउँदिन । तर नराम्रो सपना देख्यो भने सुनाउनु पर्छ रे यसैले म त सुनाउँछु । सपनामा युवकहरु कत्तिको आउछन् ? आउँदैनन् । तर विहे भएको देखेकी छु । नचिनेको केटासँग विहे भएको, श्रीमती भएर उसको घरमा गएको देखेकी छु । चिनेको भए पो मजा आउँथ्यो। कोही न कोही सपनाको राजकुमार होलान, सपनामा कत्तिको आउँछन् ? मेरो कोही ड्रिम व्वाई छैनन् र सपनामा पनि आएका आउँदैनन् । सपनामा कुनै युवकसँग सम्भोग गरेको देख्नुभएको छ ? सेक्स नै गरेको त देखेकी छैन । तर, मजाले चुम्वन गरेका देखेकी छु । नढाँटी भन्नुस न कोसँग देखिंदो रहेछ प्रायः सेक्स सम्बन्ध राखेको ? प्रायः नचिनेको मान्छेसँग मात्र देखिन्छ । चिनेको मान्छेसँग भएपो मजा आउथ्यो ! यस्ता सपना देखेपछि अधिकांशलाई स्वप्नदोष (नाईटफल ) हुन्छ नि, तपाईलाई भएको छ ? आनन्द त लाग्छ । तर, स्वप्नदोष भएको छैन । सपना मिठो देख्दा विहान कत्तिको सिरानी च्याप्नुहुन्छ ? छैन त्यस्तो त देखेको सपना सम्झनुहुन्छ ? प्रायः राम्रो सपना मात्र सम्झन्छु । सपना कहिल्यै विपना भएको छ ? एकदुई दिन ढिलो भएपनि विपना भएको छ । एकपटक म अविर नै अविरले ढाकीएकीे थिएँ सपनामा । भोलिपल्टै अवार्ड पाएँ । सपनामा कहिलेकाहीं आफैं मरेको देख्नुभएको छ ? धेरैपटक । कहिले गोली लागेर, कहिले छुरी लागेर मरेको देखेकी छु । मरेको सपना देखेर उठेपछि बाल बाल बचियो जस्तै लाग्दैन ? विहान उठ्दा डर लाग्छ, के भइरहेका छ जस्तो लाग्छ । कस्तो खालको सपना देख्दा राम्रो र नराम्रो हुन्छ भन्ने वुझ्नुभएको छ ? उकालो चढेको, घोडा चढेको लगायतका सपना राम्रो हो भन्छन् । कालो कपडा, सेतो कपडा, पानी चलाएको सपना नराम्रो हो भन्ने लाग्छ । फिल्म लाईनसँग सम्वन्धीत सपना देख्नुभएको छैन ? एकपटक मैले अवार्ड पाएर पनि लिन नगएको सपना देखेकी थिएँ ।